Aterineto Sy Vetaveta. Fanehoana Hevitra, Fikatrohana, Fitsipika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Febroary 2015 19:14 GMT
Resaka an-databatra momba ny Aterineto Sy Vetaveta. Fanehoana Hevitra, Fikatrohana, Fitsipika tao amin'ny Vovonamben'ny Global Voices. Sary an'i Georgia Popplewell
Lahatsoratra nivoaka voalohany tao amin'ny APC.org
Maro erantany no nampiasa ny aterineto hiresahana lohahevitra miresaka zava-pady, niteraka fandinihana sy fieritreretana momba ny miralenta sy ny fananahana (tsy manaraka ny fenitry ny tsy fitoviam-pananahana), ary hihodinana an'ireo sivana tranainy sy ny fitantaràn'ireo mpilaza mahazatra. Mihoatra lavitra noho ny fanivànana sarinà nono ataon'ny sehatra media sosialy sy ireo sary vetaveta saiky hita manerana ny aterineto, misy fahasarotana be ny famokarana sy famoahana votoaty miresaka firaisana ara-nofo ety anaty aterineto, ary vàhana be ho an'ny aterineto ho toy ny habaka iray ho an'ny fikatrohana momba ny zo ara-pananahana.
Io no zavatra nobanjinina tamin'ny dinika an-databatra APC voalohany tamin'ny Global Voices Citizen Media Summit (Vovonamben'ny Mediam-Bahoaka) natao ny 24-25 Janoary teo. Jan Mollman, avy amin'ny fandaharanasa momba ny vehivavy ao amin'ny APC no nandrindra ny fifanakalozan-dresaka iray niarahany tamin-dry Dhyta Caturani, avy amin'ny “Engage Media“; Bishaka Datta, avy amin'ny “Point of View Mumbai“; Naomi Fontanos, avy amin'ny “Gender and Development Advocates (GANDA) Philippines; ary Ana Santos, avy amin'ny “Sex and Sensibilities“.
Ny fotokevitry ny mpandàla ny maha-vehivavy amin'ny aterneto no novelabelarina, nampidirin'i Jan Moolman ho toy ny fanontaniana hoe “Toy ny ahoana no endriky ny mpandàla ny maha-vehivavy ety anaty aterineto?”
Ny inona no tonga voalohany? Ny vetaveta no nandrafitra ny fomba fijery sosialy sa ny fomba fijery sosialy no nandrafitra ny resa-betaveta?, hoy i Dhyta Caturani nanontany. Firenena maro, toa an'i -indonezia, no manapa-kevitra hibahana ny resa-betaveta sy izay teny fanalahidy mifandraika amin'ny resaka firaisana ara-nofo “mba ho fiarovana ny vehivavy” raha ny voalaza. Saingy inona aloha no famaritana ny hoe vetaveta? Vehivavy mampiseho ny hodiny ve? Mampinono? Vetaveta ve ny mifanoroka? Ary ny tantaram-pitiavana? Matetika ireo votoaty momba ny LGBT (mpitia ny mitovy taovam-pananahana) no raisina ho vetaveta, ka bahanana. Dia toy izany ny fanabeazana ny resaka firaisana ara-nofo. Inona no fitondrantena ara-maoraly? Inona no resa-betaveta manafintohina? Iza no mamaritra azy ireny?
Inona no vahaolana arosontsika?, io no fanontaniana naroson'ireo mpiresaka an-databatra. “Amin'ny maha-vehivavy, dia ilaintsika ny manaitra ny saina amin'ny maha-zava-dehibe ny resaka zo ara-pananahana sy ny fahalalahan'ny aterineto”, hoy i Caturani nanitrikitrika. “Ny herisetra ara-nofo, na ao anaty aterineto na ety ivelany, dia mifandray. Tsy natao ho tratra farany ny vehivavy fa tokony ho mpisehatra ao anatin'ny tolona atao”.
Nampahafatatra ny asan'ny vondrona GANDA Filipinas mpiaro ny zon'ireo LGBT i Naomi Fontanos. “Misy vondrom-piarahamonina goavana ahitàna ireo nanova taovam-pananahana eto Filipina, saingy ara-tantara dia voahilikilika izy io. Nisy ny famonoana tamin-kerisetra natao an'ireo vehivavy nanova taovam-pananahana teto Filipina, mbola betsaka ny raharaha tsy voavaha.” Narosony ny tranga nanjo an'i Jennifer Laude, izay nisarika ny sain'izao tontolo izao ho amin'ny olan'ireo nanova taovam-pananahana ary nampivondrona hetsika fitakiana rariny sosialy maro. “Nitàna toerana goavana tamin'ny fanasongadinana ny vondrom-piarahamonin'ireo nanova taovam-pananahana ny aterineto, saingy koa nanome vàhana fanehoankevitra feno fankahalàna tsy hita noanoa”.
Nofaranan'i Fontanos ny famelabelarany, tamin'ny fametrahany ny fifanoheran-kevitra misy amin'ny tolona ho amin'ny zon'olombelona ety anaty sy ivelan'ny aterineto. Ny fahalalahana maneho hevitra vs Kabary miaty fankahalàna; Fandraisana andraikitra sy Fifanajàna vs. Ny maha-niova taovam-pananahana; Zo hanafintohina vs. Zo hiseho amin'ny maha-izy ny tena
Ana Santos niresaka momba ny Vehivavy ety anaty Tranonkala sy ny tsingerin'ny herisetra elektronika. Nosarihany ny saina ho amin'ilay lahatsoratr'i Amanda Hess hoe “Nahoana ny vehivavy no tsy tonga soa ao anaty aterineto”, izay niteraka hafatra maro feno fankahalàna sy fandrahonana ho faty. “Maharay fandrahonana misimisy kokoa sy hafatra vetaveta mivantambatana ny vehivavy. Habaka tsy misy fitoviana io.”
Tsaroany ny lanjan'ireo lalànan'ny tolona izay mety azo atolotra ho toy ny fiarovana ny vehivavy , nefa nampisaina ho fitsipika hamelezana ny fahalalahana maneho hevitra. “Ny fiarovana ny vehivavy ety anaty aterineto no olana iray manaraka ho an'ny zo sivily”, hoy ny nambàrany.
Niresaka momba ny fihaonan-dàlan'ny miralenta, ny resaka fananahana ary ny aterineto i Bishaka Datta avy amin'ny “Point of View Mumbai”. “Ny Fahalalahana sy ny Fisokafana dia tokony ho dinihana miaraka amin'ny olan'ny ara-pananahana. Rehefa misaina fiainana manokana isika, fanekena, fanarahamaso, ndeha hitady làlana hampifandrohizana azy io amin'ny tsy rariny iainan'ny tsirairay, tafiditra amin'izany ny antony noho ny resaka fananahana na miralenta.”